Ukungafi kweMedusa. Yazi zonke iimpawu zayo kunye neemfihlelo | Ngeentlanzi
Ngokuqinisekileyo ulivile ibinzana elithi "inyani ayiqhelekanga kunentsomi." Ewe, akukho nto inokuthi iqhubeke nenyaniso, indalo isibonisa amandla ayo akhethekileyo nawo onke amandla ayo kunye neentlobo zezilwanyana ezingabonakali ziyinyani. Kule meko, sithetha ngohlobo oluthi, nangona lubonakala ngathi sisiphumo sentsomi, luyinyani ngokupheleleyo. Imalunga ne- jellyfish engafiyo. Igama layo lenzululwazi ngu I-Turritopsis iNitricula. Inempawu abantu abaninzi abanqwenela ukuba nazo, ukungafi.
Kweli nqaku siza kuthetha malunga neempawu zejellyfish engafiyo kwaye siza kufunda ngakumbi malunga neemfihlo zayo.
3 Umjikelo wejellyfish engafiyo
5 Izisongelo eziphambili
Le yinto engaqhelekanga. Umntu ophilayo ongafiyo. Kwaye yile jellyfish inamandla okuzihlaziya kwaye iphile ngonaphakade. Ngalo lonke ixesha ithatha umonakalo, iyakwazi ukuzihlaziya ize iziphilise. Ayisiyiyo kuphela amandla ayo okuzala ngokutsha anomdla, kodwa, ngokubonakalayo, yenye yezona jellyfish zintle ezikhoyo.
Inesambrela esenziwe ngentsimbi emide esingaphezulu kweemilimitha ezi-5 ububanzi. Ithathwa njengeyona jellyfish incinci kwimeko yabantu abadala. Ayifuni ubungakanani obungaphezulu, kunye namandla ayo okuzala ngokutsha, ayifuni ubungakanani obukhulu ukwenza iintshukumo zayo. Ukwenziwa kwesambrela kulungile kwaye kubhityile kwaye akukho mbala. Ndiyabulela koku, sinokubona ngaphakathi kwejellyfish ngokulula.
Inenkqubo ecekeceke yokwetyisa ebomvu kunye nongqameko omhlophe ogubungele oko. Xa i-jellyfish engafiyo ifikelela kwinqanaba layo lokudala, iyakwazi ukuba neetende ezincinane ezilikhulu. Nangona kunjalo, amantshontsho aqanduselwayo awanazo ngaphezulu kweshumi elinambini. Ngokuhamba kwexesha kunye nophuhliso, ziyakhula zide zibe nenani elinjalo.
Akuyondlwan 'iyanetha ukufumana indawo yejellyfish engafiyo. Kufunyenwe kwiilwandle emhlabeni jikelele. Olunye uphononongo lufumene unxibelelwano phakathi kweendawo zabo emva kokubabona kwiindawo ezahlukeneyo kwaye kuye kwafakazelwa ukuba bane-genetics exutywe nezinye iintlobo zejellyfish. Kunokuthiwa indawo esasazwayo apho bazalise kakhulu kulwandle lweCaribbean.
Kulapha apho bekucingelwa ukuba yaqala ukufudukela kwezinye iilwandle kunye neelwandle ngamanzi afudumeleyo. Ezi jellyfish zikhetha amanzi afudumeleyo kunamanzi abandayo. Esinye sezizathu zokuba bandise ngakumbi nangakumbi kukuba abafi. Ukuba abafi, banako ukuvelisa kwakhona ngokuphinda-phindayo de kubekho ngakumbi nangakumbi.
Into emele ukukhankanywa kukuba abafi bodwa. Kodwa ukuba bayahlaselwa banokudliwa ngokugqibeleleyo okanye babulawe. Kule meko, wayeza kufa. Kuba iyijellyfish ekwaziyo ukuzikhusela nokubaleka ngokulula amarhamncwa, amandla ayo okusinda aphezulu kakhulu Kwaye, ngenxa yoku, basasazeka kakhulu kwihlabathi liphela.
Umjikelo wejellyfish engafiyo
Siza kuhlalutya umjikelo wobomi wejellyfish engafiyo. Ubomi buqala njengeplula larva, njengayo nayiphi na enye i-jellyfish yolunye uhlobo. Xa ikhutshelwe elwandle, iya kukwazi ukondla de ikwazi ukuzinza elulwalweni enokuyisebenzisa ukuzenzela ukutya.
Zininzi iimeko apho kuye kwafunyaniswa ukuba imibungu ilungisa kumaqokobhe eemollusk ahlala phezu kwelitye phantsi kolwandle. Njengoko beqala ukuziqhelanisa nokuzinza, benza iikholoni zokwenyani zee-polyps apho kuvela khona enye i-jellyfish encinci eza kuthi qheke kule ndawo ukuze iqalise ngokukhululeka. Nantsi indlela, ngalo lonke ixesha, I-jellyfish engafiyo iyakhula kwaye ikhule. Kuba abafi, bafa kuphela xa bezingelwa. Inqanaba lokuvelisa kwakhona liphezulu, ke ngoku kukho ngakumbi nangakumbi kwihlabathi liphela.
Ukuba i-jellyfish iyakhula kwaye kwinqanaba layo labantu abadala kuyafika ixesha apho isifo sibabangela umonakalo owoneleyo onokuthi uphele ubomi babo, bayakwazi ukuguqula yonke inkqubo. Ngokufanelekileyo, Bayakwazi ukwaphula yonke inkqubo yeselula ukwenza i-polyp kwakhona kwaye kwabo baya kuphuma jellyfish leyo iya kuba ikopi ngqo yabantu abadala. Unokuthi zii-clones.
Kuba le nkqubo inokuphindaphindeka kaninzi, olu hlobo lwejellyfish luthathwa ngokungafi.
Abantu abaninzi banamathandabuzo malunga nokuphefumla kwezi zilwanyana. Ngokungabinalo ilungu elithile lokuphefumla, amathandabuzo ahlasela abantu abaninzi. Sisibona nje isisu sakhe ngolusu olubonakalayo. Nangona kunjalo, asikwazi ukubona iigill, imiphunga okanye nantoni na. Kwaye yile jellyfish Banokuphefumla ngenkqubo yokusasazeka.
Njengezinye izilwanyana ezinje ngeprotozoa kunye nezinye izinto ezinje nge Iziponji zolwandle baphefumla ngokusasazeka kweseli. Oko kukuthi, benza utshintshiselwano ngegesi kunye neoksijini enyibilikileyo emanzini ngenxa yomsebenzi weeseli zabo. Le nkqubo inokuqhutywa ngokugqibeleleyo ngaphandle kwesidingo sokuba ijellyfish ibe nelungu elithile.
Nangona kuhlala kukho ioksijini eyaneleyo emanzini kuzo zonke iintlobo, Awuyi kuba nakho ukufumana uninzi lwezi jellyfish kunye, kuba zichithe ioksijini. Ukuba kukho i-jellyfish eyaneleyo engafiyo kufutshane nenye, iya kuya kwimimandla yeoksijini, kuba xa iyonke iyanciphisa ioksijini kwaye yonyusa icarbon dioxide.
Nangona eyi-jellyfish engafiyo, unazo nezinye izoyikiso ezinokumbulala. Indlela yokubuyisa umva inkqubo ye-polyp iyisebenzisa kuphela xa isongelwa lolunye uhlobo kwaye yonakaliswe kakhulu. Ukuba inethuba elihle lokutyiwa, Iyakwazi ukuguqula iiseli zayo zibe sisimo esitsha kunye nesihlaziyiweyo ngendlela yokuba zonke iiseli zazo zibe yinxalenye ye-polyp entsha. Le polyp iya kubangela ukuba kubekho i-jellyfish engafaniyo nayo.
Ndiyathemba ukuba uluthandile olu lwazi kwaye luyakunceda ukuba wazi ngakumbi malunga ne-jellyfish engafiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izilwanyana ezingenamqolo » Ijellyfish engafiyo